MacOS Yakakwira Sierra inotibvumidza isu kumisikidza kana isu tichigovana ruzivo neApple yekuvandudza iyo system | Ndinobva mac
Isu takaburitsa vhezheni yekupedzisira yeMacOS High Sierra kubva nezuro, iine dzimwe nhau kupfuura dzaungatarisira pakutanga. Zvishoma nezvishoma takawana zvitsva kana zvakavanzika-zvakavanzika mabasa atisina kuwana kubva kune ruzivo rwunopihwa neApple pawebhusaiti yaro. Asi hazvisi zvese kuvandudzwa kwemushandisi, Apple inoda kuunganidza dhata yekuvandudza ruzivo kana mhinduro kubva kune vanogadzira, asiwo nekuda kwayo. Ichi chiito hachifanirwe kunge chakaipa kana chikakwenenzverwa mushe, muchokwadi chimwe chinhu chakafanana chakaitwa gore rapfuura neIOS 10. Naizvozvi, inotarisira kuenderera mberi nekuvandudzwa kwemasevhisi edu uye kunyorera.
Zvisinei, zvingave zvisina kudaro sei, tinogona kusarudza kana tichida kugovana ruzivo rwedu naApple, kunyangwe hazvo kambani ichiwona kuti mu "kufambisa" kweruzivo, Apple inoshandisa ruzha rwunoita kuti ruzivo rwedu ruverengeke kusvika rwasvika kumaseva ekambani. .
Chinyorwa chikuru cheApple cheruzivo iSafari. Izvi hazviite senge kuziva kuti ndeipi peji inonyanya kufarirwa kune imwe nharaunda. Pane kudaro, hongu chii inofarira kuziva kuti ndeapi mapeji ari kunetsa, kune rumwe rutivi, zvine chekuita nekushambadzira, asi zvakanyanya kune izvo izvo gadzira zvinokanganisa mubrowser kana maapplication. Zvichienderana nedambudziko riri mumubvunzo, tangisa zvimwe zviito mune ramangwana kugadzirisa.
Kune rimwe divi, patinoisa kana kugadzirisa yedu yekushandisa, Apple inotibvunza kana tichida kugovana ruzivo rwekuvandudza mashandisiro. Iye zvino tichaona maitiro ekugadzirisa aya ma parameter mu macOS High Sierra. Zvayo:
Tinofanira kuwana PrSystem mareferensi.
Tsvaga uye tinya pa Kuchengetedza uye Kuvanzika.
Mubara reruboshwe, tichaona mune yekupedzisira sarudzo: Analysis. Isu tinobaya padziri.
Iye zvino, kurudyi, isu tichaona sarudzo nhatu dzekugovana ruzivo: Goverana Mac analytics, goverana nevakagadziri veApp, share iCloud analytics.
Kana isu tichiona sarudzo dzakaremara, sekumashure, tinya padlock muzasi kuruboshwe uye vhura. Iyi nhanho yedudziro ndeye hutsva hweMacOS Yakakwira Sierra, inotibvumidza isu kusarudza iro ruzivo rwatinoda kugovana uye chii kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » MacOS High Sierra inotibvumidza kuti tione kana tichigovana ruzivo neApple kunatsiridza sisitimu